Xildhibaanada iyo Wasiirada Hawiye oo shaqo joojin sameeyey iyo xiisad jirta |
Xildhibaanada iyo Wasiirada Hawiye oo shaqo joojin sameeyey iyo xiisad jirta
buy baclofen online without prescription, buy lioresal online. – Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan DF isla markasna kasoo jeeda Beesha Hawiye ayaa maanta shaqo joojin sameeyay iyadoona arrintooda ay dabo socotay heshiiskii shalay lagu mideeyay mamulada isku haya mamulka Koonfur galbeed.
Amarka ay shaqada ku joojiyan masuuliyiintan ayaa kasoo baxay qaar ka mid ah Odayaasha Hawiye oo sheegay inaysan raali ka ahayn qaabkii heshiiska shalay Muqdisho loogu galay iyo colaadda uu xafiiska UNSOM ka hurinayo dalka Soomaaliya..
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inaysan aqbali karin go’aanka lagu xaliyay dhinacyada Baydhabo isku haya,wuxuna ku guudiyay inay shir iskugu imaan doonan kana soo saari doonaan go’aan midaysan.
Xaad ayaa sheegay Labada Shabeelo inuu maamul u dhisan yahay kaasna ay taagarsan yihiin, balse waxa uu sheegay inaysan marnaba taageeri doonin heshiiska iyo mamulka KMG ah ee saddexda gobal laga dhigay.
Arrintan ayaa waxay dhabar jab wayn ku tahay Madaxwaynaha DF Xasan Sheekh, oo ku fashilmay inuu xal waara u raadiyo gobalada Shabeelooyinka, Bay iyo Bakool maadama ay heshiiskii shalay ka hor yimaadeen beesha uu kasoo jeeda.
Xiisad siyaasadeed ayaa docda kale ka aloosan magalada Baydhabo iyadoona heshiiska Xamar lagu saxiixay lagu kala aragti duwan yahay.
Madoobe Nuunow oo sheegtay inuu yahay madaxwaynaha Lixda gobal ayaa warbaahinta u sheegay inaysan waxba ka khusayn heshiiska 11-ka doqob ah ee shalay lasoo saaray wuxuna sidoo kale sheegay inay shacabka gobaladaasi ay doorteen xaqna ay ku taagan yihiin.
Waxa uu beeniyay Nuunow inuu shirkaasi u matalayay Cabdifutaax Geeseey dhankooda aysan cidna u joogin taasina ay cadayn u tahay inuusan ahayn mid lagu dhan yahay waa sida uu sheegay.